WebSetNet - Technology Nhau
Anenge svondo rapfuura, Microsoft yakazivisa kuti ichatanga kubvumira vashandisi kuisa mitambo mune chero folda yesarudzo yavo. Iyo ficha yakasekwa kuti isvike munguva pfupi, uye ikozvino yavepo. Izvi zvisati zvaitika, mitambo yakaiswa mune yakavanzika Windows dhairekita inonzi WindowsZvishandiso, izvo zvanga zvisingasvikike nevashandisi. Iwe unozofanirwa kunge uri muXbox PC Insider Preview Chirongwa, kuti uwane… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xbox PC app ikozvino inoita kuti vashandisi muInsider Chirongwa vaise mitambo mune chero folda, heino maitiro ekuzviita.
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 yave kuwanikwa. windows-10-enterprise-ltsc-2021 Iyo itsva Yenguva Yakareba Yesevhisi Channel vhezheni ye Windows 10 haiwanikwe seyeretail version. Kuburitswa kutsva "kunowedzera Windows 10 Enterprise LTSC 2019" uye chimiro chayo seti yakaenzana ne Windows 10 vhezheni 21H2, yakaburitswa neMicrosoft svondo rino. Windows 10 Enterprise LTSC 2021 inosanganisira… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 10 Enterprise LTSC 2021: heino shanduko huru
Musi wa9 Mbudzi 2021, Microsoft yakaburitsa Cumulative Update KB5007205 ye Windows Server 2022, yakakosha kuchengetedza iyo yakaunzawo humwe hunhu hunovandudzwa. Iyo changelog manotsi: Inogadzirisa nyaya yekuti mamwe maapplication anogona kunge aine mhedzisiro isingatarisirwe paunenge uchipa mamwe mashandisirwo emushandisi zvinhu kana pakudhirowa mukati meapp. Unogona kusangana nenyaya iyi ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Nhamo Nyowani yema admins seCumulative Update KB5007205 inotyora Defender ye Endpoint
Enda kune peji 5084